Seho miavaka no ho hita ao. Misy ny seza hiadivana ka, io tsy azo lavina. Tsaroana avokoa, ireo fanahiana Nahalasa ambiroa, nankarary koa, toa fijaliana. Izao kosa ny SP ihany indray no manala azy. And-dry zareo mpitory mpitandrina hono ny fiangonana ka tsy misy mahazo mikitika.
Ra tsy protestant ndray tsy mahita sampona otrzao. Mais avant tout ça? Zany lou tsy ferana e… calcul isankarazany, politika ao daholo, fa rehefa te hiditra koa dia aoka samy matanty e! Izao kosa ny SP ihany indray no manala azy. Fanontaniana eny imolotry ny rehetra io, ary inoana fa hisy valiny ato ho ato. Firy taona izay pasitera no teo?
Somary tranga hafakely no niseho tetsy Ambondrona, tao amina fiangonana iray teny an-toerana. Raikitra ny sakoroka nandritra ny fotoam-pivavahana. Zavatra hafa tanteraka no niseho nony tonga tany am-piangonana.
Teo no raikitra ny vely baiboly, ara-bakiteny. Fanontaniana eny imolotry ny rehetra io, ary inoana fa hisy valiny ato ho ato. Olomboahositra io pasitera io hoy ianao, ary ilay pasitera nozimbazimbainareo tam 3 herinandro lasa izay tsy olomboahosotra?
Raha vola indray, aza resahinareo akory fa samy mampiasa vola be avokoa na ianareo mpisakoroka na ianareo mpanongana. Mifona aminareo eto aho raha tsy mitovy hevitra isika,tadidio kosa alo fa ny fitiavam-bola diso tafahoatra no fototry ny ota.
Tsimety ve ra mifampiresaka sy mifanazava amina toerana hafa. Mampalaelomiverindalana ny ondry maita anizao. Fa ny Helo tompoko tsy maintsy asiana olona, ary raha politika no resahana dia samy mitady Clients daholo na Jesosy na ny Devoly.
Ka anao ny safidy. Tiako mxraina mba vakianao Pasteur iti mail ko ity na mba hataovy tonga any aminy re, dieny mbola misy tombonandro. Izao kosa ny SP ihany indray no manala azy. Tsy mino izany ho resaka sisi-bola izany aho fa misy rariny ao, fitondràna ny fiangonana izany.
Ireto kosa tokony hanaiky ary ny ankilany tsy handranitra na hirehereaha fa nandresy. Zany lou tsy ferana e… calcul isankarazany, politika ao daholo, fa rehefa te hiditra koa dia aoka samy matanty e!
Misy ny seza hiadivana ka, io tsy azo lavina. Tsy misy seza hiadivana fa ny rariny no tadiavina.
Mba fantatrao ve hoe: Ireo no tena mikajykajy ny volam piangonana ao, Efa didy no omena hamoahany vola saingy tsy manaiky. Ary efa miray petsapetsa ny PS sy ireo olona ireo. Raha tsy misy interets financiers aoinoako fa tsy nikiry ireo fa efa niala toy ny hafa. And-dry zareo mpitory mpitandrina hono ny fiangonana ka tsy misy mahazo mikitika. Rehfa izay no fahefana lehibe dia tokony hanaiky ny fahefana lehibe. Tsisy adihevitra tokony hatao intsony. Na izany aza tkn handinika koa ny foibe sy ny synoda fa matoa misy ny tranga toa izao dia misy andraikiny koa ao mba tsy hampiparitaka ny ondry.
Hatrany ampiangonana ny ady seza sy ny fitiavantena.
Tsy izany ve le hoe: Ny lohany no matsatso. Hoy ny horakoraky ny olona raha nisy fiara nifandona tao andrenivohitra tao: Mifanaova manimaniny nareo mpamily roa ireo fa na ny mpitondra aza marainna efa mifanao manimaniny é. Ary izao Ambondrona izao e!!! May Ambondrona zany koo!!!
Hahaha mbola resaka hafa koa iny. Malahelo ny zava-miseho ao fiangonana Ambondrona ny tena avy aty tany lavitra aty satria nahita soa tao ihany t androny. Mpitandrina hafa moa t izany fotoana izany ary membre chorale Serafima. Sampy zany ry Zuzu a! Raha ilay nitranga omaly dia sampy tsotra izao! Ny tabilao milàza ny toebola ery aorina aza efa ho bobongolo….
Efa miparitaka etsy sy eroa ny resaka nefa ny mpivavaka tao toa betsaka no mbola tsy mahalala na inona na inona. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables.
En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées. Raikitra ny sakoroka tao am-piangonana. Redaction Midi Madagasikara 27 juillet 61 Comments. Ra tsy protestant ndray tsy mahita sampona otrzao. Devoly daholo avovao fototr izany rehetra izanytsisy afats izay. Hafa indray ity hihihi.
Efa nisy fandrosoana ve ny asa fanamboarana ny fiangonana? Firy taona izay pasitera no teo? Ianao ve aloha no nanaovana lavage de cerveau sa manana porofo mivaingana izany ianao?